Ogas နှင့် Gaddam တို့၏ 'ဘီလီယံနှင့်ချီသောအတွေးအခေါ်များ' (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn ပေါ်တွင်ပြန်လည်စဉ်းစားခြင်း
“ စိတ်ပညာယနေ့” ဘလော့ဂါ Leon F. Seltzer သည်မကြာသေးမီကအင်တာနက်နှင့်လူ့လိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒများ (Ogi Ogas နှင့် Sai Gaddam's အပေါ် အခြေခံ၍ Herculean ၁၂ ပိုင်းပါသောဘလော့ဂ်စီးရီးကိုမကြာသေးမီကပြီးစီးခဲ့သည်။ တစ်ဦးကဘီလီယံဆိုး Thoughts, 2011) ။ မိမိအခုနှစ်မှာ နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းသူကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အန္တရာယ်များကိုရှင်းလင်း၏အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်အပြုလေ၏။
သို့သော်သူသည်ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏ဘေးအန္တရာယ်ကိုကြည့်။ သူ Ogas နှင့် Gaddam ၏ယူဆချက်များနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုနောက်တစ်ကြိမ်ကြည့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အထူးသ, ငါသူရှိမရှိပြန်လည်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ် တစ်ဦးကဘီလီယံဆိုး Thoughts သူကသူအကြံပြုသည့်အတိုင်းအမှန်တကယ်ကယ်တင်သည်မှာ [ကျွန်ုပ်တို့၏] လိင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့်အလိုဆန္ဒများ၏အရောင်မညီသောအမှန်တရား။ ”
အဲဒါအတော်လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ် တစ်ဦးကဘီလီယံဆိုး Thoughts အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုပေးသည် - သန်းနှင့်ချီသောသုံးစွဲသူများ၏ကျပန်းလိင်အရသာရှိသောရွေ့လျားနေသောပစ်မှတ်၏လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအများစုမှာ Ogas နှင့် Gaddam တို့မစဉ်းစားထားသော neurobiological လုပ်ငန်းစဉ်၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိသည်။ အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ် သည်းခံနေခြင်းဦးနှောက်မှဘုံတစ်ဦးဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုသူတို့စွဲသို့ချော်အဖြစ်အသုံးပြုသူ -whereby အပျော်အပါး (desensitized) ကို ပို. ပို. ထုံဖြစ်လာထို့ကြောင့် ပို. ပို. ဆွရှာတတ်၏။
ဥပမာအားဖြင့်, အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့တယောက်ဗီဒီယိုအတွက်အကြိမ်အနည်းငယ်တစ်ပါတ်ကိုရှာ။ သူတို့ရဲ့ရလဒ်များကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း ခွန်အား လူ ဦး ရေအလိုက်ညစ်ညမ်းအရသာနှင့်ပါတ်သက်သောအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအချက်အလက်အချို့ကိုထုတ်ပေးသည်။ အခြားအသုံးပြုသူများသည်ဗီဒီယိုပြီးနောက်ဖန်သားပြင်နှစ်ခုနှင့်ဗီဒီယိုကိုအစွန်း ၁၀ ခုဖြင့်ဖွင့်သည်။ အဓိကအားဖြင့်အသစ်အဆန်းကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အသစ်အဆန်းမှ dopamine squirts သည် ဦး နှောက်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့, ဒီအုပ်စုသည်ရှာဖွေရေးကိန်းဂဏန်းများအချိုးအစားမမျှတစွာပံ့ပိုးပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းမြင်တွေ့ရမည့်အတိုင်းသူတို့သည်သူတို့၏အသစ်အဆန်းကိုတတ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းအသစ်ဖြင့်လိုက်စားကြသဖြင့်သူတို့၏အရသာများသည်မကြာခဏပြောင်းလဲသွားတတ်သည်။ အသုံးပြုသူများအားလုံး၏အခြေခံလိင်ဆန္ဒများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါ ၄ င်းတို့၏အချက်အလက်များ၏တန်ဖိုးကိုကန့်သတ်သည်။
တနည်းအားဖြင့်ခြင်္သေ့၏ရှာဖွေမှုသည်အချိုးအစားမမျှတစွာသုံးစွဲသူများမှရရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း Ogas နှင့် Gaddam နှင့် ၄ င်းတို့၏စာဖတ်သူများကဤအရာကိုအသိအမှတ်မပြုကြပါ။ စာရေးသူ၏ရှာဖွေမှုများမှကျယ်ပြန့်သောနိဂုံးချုပ်ကောက်ချက်ချရန်ကြိုးပမ်းမှုသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံကိုသူသည်မူးယစ်ဆေးစွဲနေခြင်းသို့မဟုတ်စွဲလန်းခြင်းသို့မဟုတ်ရိုက်ကူးခြင်းများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်တူသည်။ စကားမစပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှာဖွေတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုမှာအကြီးမားဆုံးပြproblemsနာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဂျာမန်သုတေသီတွေက။ ဒီအစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာအလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
ဒီသုံးစွဲသူမည်မျှရှိသည်ကိုသည်းခံခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်နေသည်ကိုမည်သူမျှမသိရှိရသေးသော်လည်း Ogas နှင့် Gaddam ၏အချက်အလက်များသည်လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့် ပတ်သက်၍ နက်ရှိုင်းစွာအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောပုံစံများကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခြင်းမရှိသည့်ရာခိုင်နှုန်းသည်ကြီးမားနိုင်သည်။
ဒီ dialog ကိုစတင်တဲ့အတွက် Seltzer ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး မတရားသောသူသည် Thoughts ထွက်လာပြီငါက၎င်း၏ယူဆချက်နှင့်ပတ်သက်။ သံသယရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပြန်ကြားချက်ကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပါမည်။ ဤအပိုင်းသည်သည်းခံမှုပြissueနာကိုဖြေရှင်းသည်။ တစ် ဦး ကနောက်ဆက်တွဲ post ကိုအဆိုပါအမှာစကားပြောကြား မကောင်းသောအကြံအစည် ' အခြေခံယူဆချက်၊ အမည်ရလိင်အရသာမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။
porn အရသာ Desensitization နှင့် morphing
ဦးနှောက် plasticity အပေါ်သူ၏စာအုပ်ထဲတွင်, ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်, စိတ်ရောဂါ-Norman Doidge ကြောင်းထောက်ပြ,
ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ညစ်ညမ်းများ၏ content တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ပြောင်းလဲနေသော တစ် ဦး ဝယ်ယူအရသာ၏တိုးတက်မှုperfectlyုံသရုပ်ဖော်သောဖြစ်ရပ်ဆန်း။ ... လူကြီးများအပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၏ပလပ်စတစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်နက်ရှိုင်းစွာကြီးထွားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကပုံသဏ္areာန်မည်မျှအတိုင်းအတာအထိပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်ကိုမသိနိုင်ပါ။
အားလုံးသည်အခြေခံအားဖြင့်တူညီသောဇာတ်လမ်းရှိသည့်ယောက်ျားများစွာကိုကျွန်ုပ်ကုသခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများကိုအရသာရရှိခဲ့ကြပြီး၊ ၎င်းသည် ပို၍ ကြီးမားသောသို့မဟုတ်အငယ်ဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိသူ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်၊ သူသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုပုံစံအပေါ်နှောင့်ယှက်သက်ရောက်စေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူ၏ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်စွမ်းအားအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ …
ထို့ကြောင့်လိင်ကွဲချစ်သူတစ် ဦး သည်အနှစ်သက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကြယ်တစ်လုံး၏ဝတ်လစ်စလစ်ပုံများနှင့်စတင်နိုင်သည်။ ထို့နောက်သူသည်သူ၏ ဦး နှောက်ကတုံ့ပြန်မှုကိုရပ်တန့်သွားသောအခါသူသည်တစ်ကိုယ်တော်လိင်ဗီဒီယို၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းပြုခြင်း၊ သွင်းခြင်း၊ ဂိုဏ်းဂိုဏ်းများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်၊ လိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၊ လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူတွေကိုလိင်တူချစ်သူတွေနဲ့လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူအမျိုးသမီးတွေဟာအလားတူအဖြစ်အပျက်မျိုးကိုသတင်းပို့ကြပါတယ်။ လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတစ် ဦး သည်ဤအတွေ့အကြုံကိုမျှဝေခဲ့သည် အစောပိုင်းက post ကို:
အမြိုးသမီးမြားအကြှနျုပျကိုနည်းနည်းပဲနှိုးဆော်ခြင်းကြသော်လည်းငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံးစိတ်ကူးယဉ်ယောက်ျားနှင့်ယောက်ျားအကြောင်းကိုခဲ့ကြသည်, ငါလိင်တူချစ်သူမွေးဖွားခဲ့သည်ယုံကြည်အမြဲ, ငါ့ကိုနှိုးဆွပါပြီ။ ငါသည်ငါ့နှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါ့ထံသို့လိင်တူချစ်သူလိင်အလွန်ပုံမှန်နှင့်သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးငါအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒါဟာစိတ်ဝင်စားကြောင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါဖြောင့် porn စိတ်ဝင်စားလာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကို ပို. ပို. အထီးခန္ဓာဗေဒအတွက်အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမအင်္ဂါများအတွက် fetish ဖွံ့ဖြိုးဆဲတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ၏အညစ်ညမ်းကြည့်အလွန်အကျွံဖြစ်လာခဲ့သည်မတိုင်မီကိုယ်ကရန်မဆွဲဆောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နယူးအမျိုးအစားများတဖြည်းဖြည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူခံအတွက်အဟောင်းတွေကိုအစားထိုး။ ငါ၏အထိတ်လန့်စေရန်, ငါအလားအလာရိုးရိုးဖြစ်နိုင်ကြောင်းစဉ်းစားရန်စတင်, ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေထွက်စမ်းသပ်ဖို့အမျိုးသမီးအစောင့်အကြပ်နှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုစီစဉ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်မအများကြီး arousal တွေ့ကြုံခံစားမခွအေနကေိုအကြှနျုပျကိုမှားခံစားရတယ်။ ဒါဟာ porn ဖို့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, အတော်လေးအချိန်အတန်ကြာ porn-အခမဲ့ဖြစ်ခြင်းထိုနောက်ငါပျော်ရွှင်စွာမိန်းမတို့အဘို့အကြှနျုပျ၏ fetish သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ လိင်တူလိင်ငါ့အဘို့စနစ်တစ်ခုမှပြန်လာသောသိရသည်။ ငါသည်လည်း transexual porn pre-စစ်ဆင်ရေး transwomen တစ်လိင်တံရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုရှိနေသော်လည်းနည်းနည်းလေးငါ့နှိုးဆွဖြစ်လာသည်ဘယ်တော့မှ, ငါ့ porn တင်းမာမှုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်းကြောင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ သူကကျနော်တဦးတည်းအချိန်ကငါ့ထံသို့အယူခံခဲ့ပါကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည် add ဖို့ရှိသည်သောလိင်အင်္ဂါ, ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့လူနှငျ့အတူလိင်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ဒါဟာဖြောင့်သောသူကိုတောင်းဆိုနေတာနဲ့တူပါလိမ့်မယ်။
ဤညစ်ညမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်တိုးတက်မှုအမျိုးအစားများသည်သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏“ နက်ရှိုင်းစွာသောတိုက်တွန်းချက်များနှင့်တားဆီးပိတ်ပင်ထားမှုအများဆုံးသောအတွေးများ” (Ogas နှင့် Gaddam ၏စကားများ) ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်သည်မှာထင်ရှားသည်။ ပစ်မှတ်များသည်အလွန်လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသည်။ ရှားပါးသောသုံးစွဲသူများသည်ဖွင့်လှစ်နေစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပင်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။
4-6 နာရီ porn Bing ကနောက်ဆုံးစုံတွဲရက်။ အဆိုပါပေါင်းဘက်တွင်ကတယောက် porn ကိုငါ့လိင်မသက်ဆိုင်သောကြောင်းကိုပိုပြီးသိသာဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။ porn ကိုကြည့်အတိတ် 30 ရက်ပေါင်းကျော်5+ နာရီဖြုန်းပြီးနောက်တယောက် porn ပျင်းစရာဖြစ်လာမှစတင်! ငါကအခြားပိုပြီးစက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းနှင့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ပစ္စည်းပစ္စယရှာဖွေနေစတင်ခဲ့သည်။
ဒီတော့ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ။ desensitization ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ခွဲခြားခြင်းဖြင့်စတင်ကြပါစို့။ စိတ်ကျေနပ်မှု (လေ့ကျင့်ခြင်း) နှင့်အသစ်အဆန်းကိုလိုချင်မှုတို့သည်နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါများ၏ ဦး နှောက်ထဲသို့တည်ဆောက်ပြီးရောဂါဗေဒမဟုတ်ပါ။ နောက်ထပ်ကြက်ဆင်တစ်ကောင် (စားနေခြင်း) ကိုသင်မစားနိုင်ပါ။ ဖရုံသီးပိုင်မုန့် (၀ တ္ထု၊ ကယ်လိုရီမြင့်သောအစားအစာအတွက်ထုတ်ပေးသော dopamine) ကိုသင်စိတ်အားထက်သန်မိသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုနောက်နေ့သူ့ဟာသူထပ်ခါတလဲလဲ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီသဘာဝဖြစ်စဉ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများကို“ ဟုတ်ကဲ့!” အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားတာကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကိုအားနည်းစေနိုင်သည်။
Desensitization ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ဆက်လက် overconsumption မှပေါ်ပေါက်တဲ့ရောဂါဗေဒဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းတာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို (D2 အာရုံကြောဆဲလ် receptors အတွက်ကျဆင်းမှု) တစ်ခုစွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြသည်။ တခြားခေါင်းမာမှချည်ထားသောကြောင့်လေ့၏ကူးပြောင်းရေးကာလသက်ရောက်မှုမတူဘဲ, desensitization တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်, reverse ဖို့အချိန်ကြာ စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ.
အသစ်အဆန်း = dopamine
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်၏အမှု၌, overconsumption ၏အယူခံသူ၏ပယ်ဖျက်ဖို့အသုံးပြုသူခွင့်ပြုကြောင်း ပင်မွတ်မပြေနိုင်သော-ပြန်လည်နာလန်ထူပြတင်းပေါက်။ အဲဒီအစားသဘာဝကျကျသူ (ထိုကဲ့သို့သော dopamine နဲ့ norepinephrine ကဲ့သို့) excitory neurochemicals တစ်ဦးအလုအယက်ထုတ်လုပ်ရန်လုံလောက်သောဆွဖို့ကိုနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ်ပြန်လာရန်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်ကိုစောင့်ဆိုင်း၏။ သူမဟုတ်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ arousal ရရှိ, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုခက်ခဲ။
အခုတော့သူ့ဦးနှောက်ကမှတ်ယူ အားလုံး အကြောင်းအရာများကိုမည်သို့ပင်ဖြစ်စေသူ့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသော porn သည် neurochemicals ကို“ go get get” ကိုထုတ်လွှင့်သောကြောင့်တန်ဖိုးရှိရှိသည်။ ထပ်မံ၍ သူလိုအပ်သမျှသည်၎င်းသည်သူ၏အခြေခံလိင်ဆန္ဒများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆန်းသစ်။ တုန်လှုပ်စေသောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ အတွက်မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေ မတရားသောသူသည် Thoughts သောကွောငျ့ဖွစျသညျ သာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအရသာ porn အသုံးပြုမှုကိုလှုံ့ဆျောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာအလုံအလောက် dopamine လွှတ်ပေးရန်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုမျှဝေးကွာအမှန်တရားကနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Dopamine သင်ကဖြစ်ပေါ်သို့သော် dopamine ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်ထူးဆန်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအရှိန်မြှင့်ခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှု၏အဓိကသတိပေးလက္ခဏာဖြစ်သောကြောင့်ညစ်ညမ်းစွဲသူများ (သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ဦး) အားသူတို့၏လိင်ဆန္ဒများနှင့်ပတ်သက်သောအသုံး ၀ င်သောအချက်အလက်များကိုပြောသောကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ပို၍ စွဲမက်စွဲလမ်းလေလေ၊ သာမန်အပျော်အပါးများသည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနည်းပါးပြီးပိုမိုပြင်းထန်လာသောကြောင့်၎င်းသည်ဤအာရုံကြောဓာတုကယ်ဆယ်ရေးလိုအပ်မှုပိုမိုလိုအပ်လေဖြစ်သည်။
ပိုဆိုးသည်မှာ၊ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်အခြေခံတိမ်းညွတ်မှုများနှင့်မကိုက်ညီသောအရာတစ်ခုခုကိုအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်လျှင်၊ ၎င်းသည်သူ၏ ဦး နှောက်ထဲတွင် dopamine နှင့် norepinephrine အလုံအလောက်ထုတ်ပေးသည် (စိတ်လှုပ်ရှားစရာသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖြစ်စေသောကြောင့်)၊ မိမိအဆုလာဘ် circuit ကိုမှအသစ်သောလှုံ့ဆော်မှု။ နောက်တစ်ကြိမ်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များနှင့်သူတွေ့သောအခါသူသည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနှိုးဆော်သံကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ယနေ့ကုထုံးပညာရှင်များသည်သူ၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကိုသူရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်းအလျင်အမြန်အာမခံပေးလိမ့်မည်။ မဟုတ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်သူတို့နှစ်သက်သောအမျိုးအစား (ဆိုလိုသည်မှာသူတို့၏အခြေခံလိင်ဆန္ဒများကိုထင်ဟပ်သောအမျိုးအစား) အတွင်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသစ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အသစ်အဆန်းကိုပြင်ဆင်နေကြသည်။ သို့သော်ယနေ့ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်သည်အထင်သေးလာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏လိင်အရသာသည်နေရာတစ်နေရာသို့ပြောင်းလဲသွားသည်ဟုဆိုကြသည်။ ထိုအဆိုအရယောက်ျားနှင့်မိန်းမများတွင်စွဲလမ်းမှုနှုန်းသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။
အရှိန်မြှင့်စက်လှေကားပေါ်တက်သူများသည်ယခင်အရသာများနှင့်အထွတ်အထိပ်သို့မရောက်နိုင်တော့ကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြသည်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာက (သူတို့အတွက်) သူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ရွေးချယ်မှုအသစ်တွေကပိုပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းလေလေ၊ သူတို့ကြည့်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုကဖြန့်ချိတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့်ဒီရွေးချယ်မှုတွေကပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်လာတယ်။
သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုလျှော့ချလိုက်ခြင်းသည်အလိုအလျောက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည်ဟုရံဖန်ရံခါသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးသူတို့၏ dopamine receptors နှင့်သူတို့၏အစောပိုင်းအရသာအပေါ်တုန့်ပြန်မှုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်? အပတ်အနည်းငယ်တိုင်ပင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်မတတ်ဝံ့ကြ လိင်စိတ်ပယ်စက်စက်စေခြင်းငှါ သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုဟန်ချက်ညီစေဖို့ယာယီအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဆိုတာသူတို့သတိမထားမိကြဘူး။ လမ်းပေါ်ရှိစကားလုံးမှာ“ ၎င်းကိုသုံးပါ၊ ဆုံးရှုံးပါစေ” ဖြစ်ပြီး၊ များစွာသောသုံးစွဲမှုကြောင့် Mojo ကိုဆုံးရှုံးနေရသောကြောင့်ရပ်တန့်ရန်သူတို့ကြောက်လန့်နေကြသည်။
တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်ဤအသုံးပြုသူများအတွက်ကိစ္စကသူတို့နက်ရှိုင်းသောအလိုဆန္ဒများကိုလိုက်စားလွတ်လပ်ခွင့်, ဒါပေမယ့်အဓိကအားဖြင့်အမှတ်မထင်အသုံးပြုသူများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအားဖြင့်အပေါ်ယူဆောင်ရှောင် neurochemical ပြောင်းလဲမှုများထုတ်ကုန်များမှာအရာမဟုတ်ဘဲဂြိုလ်သားအရသာမဟုတ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဝေးသူတို့အခွအေနနားလည်ပြီးသူတို့လိုချင်တဲ့ရလဒ်အဘို့အခုတ်မောင်းဖို့လိုအပ်ရာစွဲ၏ neuroscience ပတ်သက်. သိပ္ပံနည်းကျအချက်အလက်များအနေဖြင့်မိမိတို့၏အာရုံကို misdirects ။
သောအများဆုံးအထောက်အကူဖြစ်စေအရာတစျခု တစ်ဦးကဘီလီယံဆိုး Thoughts စုံသည်ဤအချက်မှ deviant အဖြစ် (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအများစုနှင့်) သင်ရိုက်စေခြင်းငှါများစွာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့တစ် predilection ပိုမိုကျယ်ပြန့်, ပိုမိုခက်ခဲကြောင့်ခိုငျကရှင်းပြကြောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများရှိပါသည်လျှင်ရိုးရှင်းစွာ -especially "နေမကောင်း" အဖြစ်ကထုတ်ပယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဤ“ deviant” အရသာအချို့သည်စွဲခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်း (ပိုမိုအားစိုက်ထုတ်ရန်လိုအပ်ခြင်း) ကြောင့်သာဖြစ်လျှင်ကော။ အကယ်၍ လူအများလုံလောက်စွာရောဂါဗေဒအထောက်အထားများကိုတွေ့ကြုံခံစားရလျှင်၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်လာနိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့၏အမူအကျင့်များသည်“ မကျန်းမမာ” ဟုမဆိုလိုပါ။
လူ့သမိုင်း၌စွဲကပ်မှုကပ်ရောဂါများသည်ယခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပြီး၊ စွဲလမ်းသူများခံစားခဲ့ရသည့်ရောဂါလက္ခဏာများကို“ ရောဂါကင်းရှင်းရေး” ဟူသောအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်မပြခဲ့ပါ။ ဥပမာ၊ ၁၈ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်လန်ဒန်၏အစိတ်အပိုင်းအချို့သည်ခံစားခဲ့ရသည် ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကပ်ရောဂါ အရက်၏။ နှင့် ပျော်ရွှင်မှု၏သံလိုက်အိမ်မြှောင် ဒါဝိဒ်သည် Linden အဆိုပါ 1880s အတွက်အိုင်ယာလန်အတွက်စျေးပေါအီဓာတ်များကိုတစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်စွဲရေးမှတ်ထားခြင်း။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိစ္စတွင်အရသာများသည်“ ပုံမှန်” လော၊-အစားဇီဝြဖစ်စဉ်ထက်စာရင်းဇယားပေါ်မှာငါတို့အဖြေကိုအခွခေံ? ကျနော်တို့ porn အရသာ morphing မသက်ဆိုင်အကြောင်းအရာတစ်ခု neurochemical buzz လိုက်ရှာအတွက်ထုံဆုလာဘ် circuitry ခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သောဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျစ်လျူရှုလျှင်ပင်လက်ျာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလိုက်သည်ပါသလား?
နောက်ပြန်ဆုတ်အင်ဂျင်: porn အရသာပင်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသက်သေအထောက်အထား
အများစုမှာပုန်းအားလုံးအင်တာနက်ကို porn ကိုရပ်တန့်နှင့်သူတို့၏ဦးနှောက်ကပုံမှန် sensitivity ကိုပြန်သွားဖို့ခွင့်ပြုသူကိုအသုံးပြုသူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကရှာဖွေတွေ့ရှိ မဟုတ်ကြဘူး တစ်လမ်းလမ်းပေါ်မှာပြီးနောက်အားလုံး။ သူတို့ရဲ့ porn ဖြည်းဖြည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့-သေအချာ reverse ရန်, ပြောင်းပြန်အမိန့်-အားလုံးပြန်သူတို့ရဲ့အစောဆုံးအရသာဖို့လမ်းအတွက်စတင်အရသာရှိတယ်။ မကြာခဏ၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူဥပမာအားဖြင့်, အစစ်အမှန်လိင် (နောက်တဖန်) နှိုးဆွဖြစ်လာ.
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်လည်ချောင်းနာပါဝငျ ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ, နှောင့်အယှက် flashbacks နှင့်မကြာခဏ "libido flatline ။ " ၏ရှည်လျားသောကာလ သို့သော်များစွာသောသူတို့အဘို့, ဒါဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုကိုထင်ဟပ်သောသူတို့၏စစ်မှန်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကိုလုံးဝပြန်လည်ထူထောင်။ လူတစ်ယောက်ပြောခဲ့သည်
ငါအသက် ၁၃ နှစ်မှာမိန်းမတစ်ယောက်ကိုအဝေးမှလှည့်ကြည့်ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကပိုပိုပြီးညစ်ညမ်းနေတာကိုကြည့်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ ငါဟာသမိုင်းကိုအခြေခံပြီးဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိပေမယ့်ငါဟာလိင်မှုကိစ္စကိုစတင်စိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ တစ်ခါတလေကျွန်မအထူးသဖြင့်စိတ်အေးလက်အေးသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်တဲ့အခါငယ်ငယ်ကတည်းကတုံ့ပြန်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါအရမ်းစိတ်ရှုပ်ထွေးခဲ့တယ်။ porn မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းသည်သံသယလုံးဝကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်၏ libido ကိုင်တွယ်ရန်အလွန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများအားပိုမိုတုံ့ပြန်မှုရှိပြီးအမျိုးသမီးများကပိုမိုတုံ့ပြန်သည်။
အားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာမပြောင်းလဲသောဖြစ်ကြပြီးညစ်ညမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဘယ်လိုနေပါစေ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်, မပြောင်းလဲသော proclivities မှကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုမှားယွင်းခံယူချက်အပေါ် Ogas နှင့် Gaddam ကြွင်းသောအရာများ၏ယူဆချက်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းမှတဆင့်နာတာရှည် overstimulation ကြောင်းပေးထား ပြောင်းလဲ ကြည့်ရှုသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ၊ Ogas နှင့် Gaddam ရိုက်ချက်သည်လူ့ဆန္ဒအပေါ်စစ်မှန်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနည်းသည်။ ၎င်းတို့၏အချက်အလက်များကိုအသုံးချခြင်းသည်အခြားခေတ်မှအလားတူဒေတာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မှသာအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုနှုန်းကိုတိုင်းတာ။ အချက်အလက်များ၏စစ်မှန်သောအရေးပါမှုကိုပိုမိုနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လူ့အလိုဆန္ဒ၏လေ့လာမှုအပေါ်ယံဆက်လက်တည်ရှိခြင်းနှင့်လူသားနည်းနည်းအသုံးပြုမှုကျွမ်းကျင်သူများကပေါင်းစပ်မှီတိုင်အောင်ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်ပုံကိုအများပြည်သူသင်ပေး, ကသိတော့ဘယ်လိုနှင့်မည်သို့စွဲလမ်းမှုကြောင့် desensitization / သည်းခံစိတ်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာဖျက်နိုင်ပါတယ်ပါလိမ့်မယ်။
လာမယ့်ပို့စ်မှာတော့ Ogas နဲ့ Gaddam တို့ရဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာအရသာဟာမပြောင်းလဲနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားတဲ့ယူဆချက်ကိုအခြေခံပြီးအဓိကယူဆချက်ကိုပြောလိမ့်မယ်။
အသေအချာသိသော DEGUNK OGAS & GADDAM သောနောက်ဆုံးသတင်းများ